Golaha Shacabka oo maanta ka doodaya Sharciga Batroolka – Kalfadhi
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay maanta kulan xasaasi ah ku yeeshaan xarunta fadhiyada Baarlamaanka ee Golaha Shacabka waxaana la sheegayaa in uu kulankaan ka badalan-yahay kulamadii hore ee Golaha Shacabka.
Ajendaha kulanka maanta ee Golaha Shacabka oo gaaraya ilaa afar Ajende ayaa waxaa ku jira Sharciga Batroolka Soomaaliya oo ay dhawaan ansixiyeen Golaha Wasiirada Soomaaliya islamarkaana maalmihii la soo dhaafay hortaalay Golaha Shacabka.
Sharcigan oo muddo todobaad hor-yaalay Baarlamaanka ayaa maray dhowr aqrin iyo doodo uu Guddiga Batroolka geliyay, waxaana uu ku jira marxaladii u dambeysay ee cod qaadista.
Sidoo kale Sharcigan oo horay u soo ansixiyeen Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa ka mid ahaa qodobadii la isku mari waayay ee shirkii Garowe, waxaana heshiiskan haddii Baarlamaanka meel mariyo laga yaabaa in Maamul goboleedyada ay su’aal geliyaan qaabka loo marsiiyay iyo dadaalka Xukuumaddu gelisay.
Sidoo kale Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa fadhigooda maanta waxay uga doodi doonaan qodob kale oo ay kamid yihiin:-
Akhrinta 3aad wax ka badelka Sharciga Batroolka.
Akhrinta 1aad Hindise Sharciyeedka doorashooyinka.
Madaxda maamul gobaleedyada Soomaaliya ayaa dhamaantood ka soo horjeeda Sharciga Batroolka ee hadda horyaala Baarlamaanka Soomaaliya waxaana laga qabaa walaac xoog leh oo arintaan ku saabsan hadii ay baarlamaanka meel mariyaan.
Xildhibaan Jeesow oo sheegay in Xukuumadda ku guul dareysatay sugidda amniga Muqdisho